‘साइँली’ र ‘शुभ लभ’ हलमा, तर दर्शक ? « Khabarhub
‘साइँली’ र ‘शुभ लभ’ हलमा, तर दर्शक ?
काठमाडौं – आजैदेखि रिलिज भएका दुई फिल्म ‘साइँली’ र ‘शुभ लभ’ आज शुक्रबारदेखि नेपालका विभिन्न हलमा रिलिज भएका छन् । तर यी दुवै फिल्मले शुक्रबारको बिहानी शो मा भने आशा गरेजस्तो गरी दर्शक हलसम्म तानेका छैनन् ।
हलका बिहानी ‘शो’ को प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने दुवै फिल्मले दर्शकलाई हलसम्म तान्न सकेका छैनन् । आजको मितिमा ठूला बजेटका विदेशी फिल्म पनि नचलेको हुनाले यी दुई फिल्मले दर्शक हलसम्म तान्ने अनुमान गरिएको थियो । आजैदेखि हलमा हिन्दी फिल्म ‘जंगली’ पनि रिलिज भएको छ । तर यो फिल्मले पनि खासै दर्शक तान्न सकेको छैन ।
काठमाडौंका हलमा कुनै फिल्मले क्रेज देखाउन सकेका छैनन् ।
छैन ‘साइँली’ को क्रेज
स्टार कलाकार भएको यो फिल्मले हलमा दर्शकलाई तान्न नसकेको देखिएको छ । बिहीबार फिल्म प्रिमियर समेत गरिएको यो फिल्मलाई प्रिमियरमा आएका कलाकारले ‘राम्रो’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, दर्शकले भने फिल्म हलसम्म पुग्ने चेष्टा गरेका छैनन् ।
यो फिल्ममा दयाहाङ राई, गौरव पहारी, केनिपा सिंह, मेनुका प्रधान लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ । दुई वर्षअघि भाइरल भएको गीत ‘साइँली’ को नाम सापटी लिई त्यही परिवेशमा बनाइएको यो फिल्मलाई गीतलाई जस्तो दर्शकले चासो दिएका छैनन् ।
फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको कथालाई सामाजिक कथा भनिएको छ ।
‘शुभ लभ’ पनि उस्तै
आजै शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘शुभ लभ’ मा नयाँ कलाकार शीर्ष भूमिकामा छन् । फिल्ममा क्रिष्टिन पौडेल, हरिहर अधिकारी, सरोज खनाल, रविन्द्र झा लगायतका कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ । हरिहर अधिकारीको पेशासँग पनि मिल्दो यो फिल्ममा हरिहर नै मुख्य भूमिकामा छन् ।
लभस्टोरी भनिएको यो फिल्मले पनि बिहानी शो मा खासै कमाल गर्न सकेको छैन । फिल्मलाई धर्मराज शर्मा सुवेदीले निर्माण गरेका हुन् भने सन्तोषबाबु लोहनीले निर्देशन गरेका हुन् ।
यस्तै फिल्ममा राजाराम पौडेल, राजा राजेन्द्र पोखरेल, प्रदीप बाँस्तोला, सूर्य थापा, नम्रता सिम्खडा लगायतका कलाकारले पनि अभिनय गरेका छन् । फिल्ममा हरिहर अधिकारीको कथा छ भने अभिमन्यु निरवीको स्किृप्ट छ ।
प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार ३ : ०२ बजे